Rating: SKU: 60282-87-3. Category: Hormones
Mbadamba ụrọ Femodene bụ ụdị ọgwụ mgbochi hormonal a na-akpọkarị 'pill' ma ọ bụ ọgwụ mgbochi ọgwụ mgbochi ọnụ. Mbadamba Femodene nwere ihe abụọ na-arụ ọrụ, ethinylestradiol na ntụ ntụ Gestodene. Ndị a bụ nsụgharị sịntetị nke ụmụ nwanyị na-enwe mmekọahụ, hormones na estrogen na progesterone. Ethinylestradiol bụ ihe etinyere etrogen na Gestodene ntụ bụ 'usoro nke atọ' nke progesterone.
Ngwakọta ọgwụ ọnụ dị ka Femodene na-arụ ọrụ site n'ịfefe oge ịhụ nsọ nwoke. N'ime oge nsọ nwanyị, ogo nke homonụ nwoke na nwanyị na-agbanwe kwa ọnwa. Na homonụ ahụ na - eme ka akwa si n’akwa akwa wepụta (ovulation) wee kwado akwa nke nwa maka ime n’afọ. Na ngwụcha nke okirikiri ọ bụla, ọ bụrụ na àkwá ahụ akwakọpụghị etoju nke homonụ daa, na-eme ka a na-awụpụ akpa nwa dị ka ọnwa kwa ọnwa.
FDA na-atụle ọgwụ ndị dabere na nchekwa maka iji mee ihe n'oge ime ime. A na - eji edemede ise - A, B, C, D, na X, kọwaa ihe egwu dị na nwa ebu n’afọ mgbe a na-a aụ ọgwụ n’oge afọ ime.